သားငယ်လေး ဘုဏ်းလင်္ကာရဲ့ ၇နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ကို ကုသိုလ်ကောင်းမှူ တွေ ပြုလုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းစေတဲ့ ဖေ ဖေ နေထူးနိုင် – XB Media Myanmar
သားငယ်လေး ဘုဏ်းလင်္ကာရဲ့ ၇နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ကို ကုသိုလ်ကောင်းမှူ တွေ ပြုလုပ်ရင်း ဖြတ်သန်းစေတဲ့ ဖေ ဖေ နေထူးနိုင်
ပရိသတ်ကြီးရေ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေမှာ များစွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နာမည်ကျော်ကြား လူကြိုက် များခဲ့တဲ့ မင်းသားကြီး နေထူးနိုင်ကတော့ အခုလက်ရှိ Covid ရောဂါတွေကြောင့် အနုပညာအ လုပ်တွေကို ခေတ္တရပ်နားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်နော်။ နေထူးနိုင်ရဲ့ သရုပ်ဆောင်မှုတွေကို ပရိသတ်အတော်များများက အကြိုက်တွေ့နေကြတာ​​ဖြစ်ပြီး ယနေ့တိုင် အားပေးမှုအခိုင်အမာ ရရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နေသလို အားလပ်ချိန်တွေမှာလည်း မိသားစု နဲ့အတူ နွေးထွေးပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်တတ်တဲ့ နေထူးနိုင်ရဲ့ ဘဝလေးက ပြီးပြည့်စုံပါတယ်နော်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သားသားလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း မွေးဖွားထားတာဖြစ်ပြီး ယနေ့ကတော့ သားငယ်လေး ဘုဏ်းလင်္ကာရဲ့ ၇နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ မွေးနေ့မှာ ကုသိုလ်ကောင်း မှူတွေသာပြုလုပ်ပြီး ဖြတ်သန်းစေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
နေထူးနိုင်က သူရဲ့ လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာ ” အချစ်ငယ်လေး ဘုဏ်းလင်္ကာ ပါးနဲ့မားတို့ ဘ ၀ထဲ ရောက်လာတာ (၇)နှစ်ပြည့်ပါပြီပါးနဲ့မားအသည်းလေး ဘုန်ကြီးလို့အသက်ရှည်ပါစေ ကွ ယ် မွေးနေ့မှာ လေးလေးဂျွန်အတွက်ရည်စူးပြီး အိမ်ကဘုရားမှာ ‌နို့ခေါက်ဆွဲကပ်လှူ ဘုန်း ဘုန်း များအားနေ့ဆွမ်းကပ် အိမ်ထောင်စု ၁၅စုအတွက် ဆန်ဆီအချိုမှုန့်နဲ့ကြက်ဥလှူ ပါပါးက ခို စာ ကျွေး သားလေးရဲ့ မွေးနေ့အလှူလေးကိုလေးလေးဂျွန်ထက်တူရရှိပါစေ” ဆိုပြီး ရေးသား ထား တာကြောင့် ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်…. ။
Source & Photo credit – Nay Htoo Naing’s FB account
ပရိသတ္ႀကီးေရ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြမွာ မ်ားစြာသ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး နာမည္ေက်ာ္ၾ ကား လူႀကိဳက္ မ်ားခဲ့တဲ့ မင္းသားႀကီး ေနထူးႏိုင္ကေတာ့ အခုလက္ရွိ Covid ေရာ ဂါေ တြေၾကာင့္ အႏုပညာအ လုပ္ေတြကို ေခတၱရပ္နားထားတာကို ေတြ႕ရပါ တယ္ေနာ္။ ေနထူးႏိုင္ရဲ႕ သ႐ုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ပရိသတ္အေတာ္မ်ားမ်ားက အ ႀ ကိဳက္ေတြ႕ေနၾကတာ​​ျဖစ္ၿပီး ယေန႔တိုင္ အားေပးမႈအခိုင္အမာ ရရွိေနဆဲ ျဖ စ္ပါတယ္။
အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုလည္း ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ေနသလို အားလပ္ခ်ိန္ေတြမွာလ ည္း မိသားစု နဲ႔အတူ ေႏြးေထြးေပ်ာ္႐ႊင္စြာေနထိုင္တတ္တဲ့ ေနထူးႏိုင္ရဲ႕ ဘဝေ လး က ၿပီးျပည့္စုံပါတယ္ေနာ္။ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သားသားေလးႏွစ္ေယာ က္ ကိုလည္း ေမြးဖြားထားတာျဖစ္ၿပီး ယေန႔ကေတာ့ သားငယ္ေလး ဘုဏ္းလ ကၤာ ရဲ႕ ၇ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပါ။ ေမြးေန႔မွာ ကုသို လ္ေ ကာင္း မႉေတြသာျပဳလုပ္ၿပီး ျဖတ္သန္းေစတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေနထူးႏိုင္က သူရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္စာမ်က္ႏွာထက္မွာ ” အခ်စ္ငယ္ေလး ဘုဏ္းလကၤာ ပါးနဲ႔မားတို႔ ဘ ၀ထဲ ေရာက္လာတာ (၇)ႏွစ္ျပည့္ပါၿပီပါးနဲ႔မားအသည္းေလး ဘု န္ ႀကီးလို႔အသက္ရွည္ပါေစ ကြ ယ္ ေမြးေန႔မွာ ေလးေလးဂြၽန္အတြက္ရည္စူးၿပီး အိမ္ကဘုရားမွာ ‌ႏို႔ေခါက္ဆြဲကပ္လႉ ဘုန္း ဘုန္း မ်ားအားေန႔ဆြမ္းကပ္ အိမ္ေထာ င္စု ၁၅စုအတြက္ ဆန္ဆီအခ်ိဳမႈန႔္နဲ႔ၾကက္ဥလႉ ပါပါးက ခို စာ ေကြၽး သားေလးရဲ႕ေမြးေန႔အလႉေလးကိုေလးေလးဂြၽန္ထက္တူရရွိပါေစ” ဆိုၿပီး ေရးသား ထား တာေၾကာင့္ ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္…. ။
ဗဟိုအမျီုးသမီးဆေးရုံမှ မီးဖွားခါနီး အမျိုးသမီးတွေဆီကိုသွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ယွန်းယွန်း
အနုပညာပိုးပါတဲ့ သားသမီးလေးတွေ အ ကြောင်းပြောလာတဲ့ ဆုန်သင်းပါရ်